Imibuzo yesiqhelo -I-Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Ngokwanda okuqhubekayo kwesikali senkampani, i-AKF inamaqabane amaninzi nangaphezulu. Inkampani inika inkxaso ngakumbi kwintsebenziswano kumaqabane ayo, ngethemba lokuba amahlakani e-AKF kunye nabalingane baka-AKF banokubonelela ngenkonzo engcono kubasebenzisi beshishini.
Iimveliso zethu ezinxulumene ne-AKF ziyifumene i-CE kunye ne-FDA iziqinisekiso ezifanelekileyo. Ukonwabela ukuthengisa okuphambili kwiarhente.
Inkampani iqhuba ishishini lokurhweba ngeenxa zonke kwimithombo yeendaba ezinkulu zenethiwekhi.
Ukonwabela inkqubo yebhonasi yeendawo zokuthengisa zearhente rhoqo ngenyanga. Ukonwabela iinkonzo zasemva kokuthengisa ezinje ngokubuya nokutshintshiselana ngempahla (malunga neenkcukacha, nceda ujonge kwimithetho ebuyayo kunye notshintshiselwano)
Inkxaso yeVIP yabathengi:
Ikomkhulu libonelela ngeXabiso, ulwakhiwo, inkqubo kunye nokugaya okanye inkqubo yoqeqesho lwenkqubo yenkxaso kubathengi ye-VIP kwinkqubo yokusebenzisana namaqabane. Ikomkhulu linoxanduva lokusebenzisana nabasebenzi beenkonzo zabathengi ukuze basebenze ngobuchule iimveliso kunye nokusebenza kwendlela yokulandela yomsebenzisi.
Yonke imimandla Abaphathi beenkonzo zabathengi kwikomkhulu baya kulandela kwaye banike isikhokelo, banike ingxelo kwaye bajongane neengxaki nanini na.
Ukuseka inkqubo yeenkonzo zoncedo lwabathengi kunye nenkqubo, kunye Sebenzisa zonke ezi nkqubo zenzuzo kunye nenkqubo.
Inkxaso yoQeqesho lweMveliso Uqeqesho lwexabiso lemveliso Uqeqesho lokuSebenza kweMveliso
UkuBuza Rhoqo imibuzo Ukuthengisa kunye noqeqesho kulawulo Ixabiso loqeqesho lweqela loshishino lomenzeli
Ukuhlela iinkqubo zeshishini zeearhente kunye noqeqesho lokuphunyezwa kwazo.
Uqeqesho lwezakhono zokuthengisa kubasebenzi beearhente. I-FAQ yokuthengisa kunye nokulinganisa kokulwa konxibelelwano olula iqonga lentengiso elinengqondo.
Ukuseka iqela elisebenzayo. Isakhono kunye noqeqesho loMlawuli oThengisayo ofanelekileyo.
Ukwakhiwa kweqela kunye nolwakhiwo loncedo lokhuphiswano
Inkxaso yeMiboniso kunye neNgqungquthela:
I-headquarter iyasebenzisana nearhente ukuyila yonke ingcinga kunye nenkqubo yocwangciso!
Iiarhente zinokufaka isicelo senkxaso yazo, ikomkhulu liza kulungiselela abasebenzi abafanelekileyo kule ndawo yangoku ukuxhasa umsebenzi wabo.
Eyona njongo yalo mboniso kunye neforum yentlanganiso kukuphucula ukusekwa kwebhenki yokumakishwa kweearhente kunye neearhente ezityikitya kuloo ndawo.
INkxaso yeNtengiso kunye neNkxaso
I-ofisi elikomkhulu ibonelela ngenkxaso yentengiso kwiNtengiso yesizwe, kubandakanya imiboniso, intengiso yeendaba, iiforamu, njl
Ngokwenqanaba lophuhliso lwentengiso yengingqi, ikomkhulu liya kubonelela ngenkxaso yentengiso kunye nembuyekezo kwiarhente ngokokusebenza kweearhente.
Ikomkhulu liza kumisela imivuzo eyahlukeneyo kuzo zonke iiarhente
Ngokuhambelana nemisebenzi yokwazisa esekwe kwimisebenzi
5. igcinwe ziiarhente zesizwe okanye zommandla okanye amaqela.
6. Inkqubo yokujoyina iarhente
1. Ukuzalisa ifom yesicelo
2. Ukuphonononga nokwamkelwa likomkhulu
3. Ukusayina isiVumelwano seArhente kunye neNtlawulo
4. Ukuseta iqonga learhente.
5. Ukukhulula ilungelo leemveliso ze-AKF
6. Ukubonelela ngolwazi lwedatha kunye nemveliso
Ukucoca i-AKF Crown
I-AKF Indlebe enxibe imaski yonyango Ukunxiba kakuhle kunye nokukhuseleka okuPhezulu
Ukunxiba uNtofontofo Ubhubhane oNgxamisekileyo Ezilahlwayo Medical Vuvu Ukutshaya umsi Ubungqina Bothuli Uthintelo lwe-PM 2.5
Inombolo yomnxeba: 0755-82778177 Miss Yang
Idilesi: A-701, Yin dong isakhiwo, No. 25, Shi hua Road, Futian Free Trade Zone, Shen Zhen
Indawo yewebhu: https: // www.ikouzhao.cn